Dowladda Emirate-ka oo dadaal ugu jirta sidii aan Siyaasiyiinta Ikhwaanka loogu soo dari lahayn Wasiirada Somaliya - iftineducation.com
Dowladda Emirate-ka oo dadaal ugu jirta sidii aan Siyaasiyiinta Ikhwaanka loogu soo dari lahayn Wasiirada Somaliya
aadan21 / January 11, 2015
iftineducation.com – Dowladda Emirate-ka Carabta oo ka mid ah Wadamada Khaliijka ee taageera Dowladda Federalka Somaliya, ayaa waxay xusul-duub ugu jirtaa inaan Golaha Wasiirada cusub Somaliya lagu soo darin Siyaasiyiinta Ikhwaanul Muslimiinka.
Emirate-ka, ayaa xilligii Xukuumaddaha Saacid iyo C/weli dadaal badan ku bixiyay, sidii ay kaga soo taggi lahaayeen ragga taabacsan Ikhwaanul Muslimiinka, ee ku sugan Magaalada Muqdisho, walow aynaan taasi dhaqan-gelin.
Emirateka waxa uu iminka u muuqdaa in uu soo rogaal celiyay waxa uuna Xukuumadda Cumar C/rashiid kala hadlayaa, sidii ay Xukuumaddiisu u noqon laheyd mid ka madax banaan xubnaha Ikhwaan-ka, si ay u noqoto mid taaba gasha.
Wararka waxay intaa ku darayaan in Emirate-ka uu xoojin doono taageerada ku aadan Dowladda Somaliya, haddii Dowladdu qaadato go’aanka ah, inaan Golaha Wasiirada laguba soo darin siyaasiyiinta aaminsan mabda’a Ikhwaanka.
Ragga ku xeeran Madaxweynaha Somaliya, ayaa waxaa la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin Urur Diimeedka Dam Jadiid, oo ah garab ka tirsan Ururka Al-Islaax, oo ay maal-geliso Dowladda Qatar.
Qatar iyo Turkiga waxaa la tilmaamaa inay yihiin Dowladaha ugu badan ee bixiya taageerada la siiyo Dowladda Federalka Somaliya. Hogaamiye-yaasha dalalkaasi ayaa lala xiriiriyaa ku dhaqanka mabaadii’da Ikhwaanul Muslimiinka.
Lama garanaayo in Ra’iisal Wasaaraha Somaliya uu soo dhaween doono dalabaadka Emirate-ka iyo in kale, waase laba kala daran mid dooro. Haddii uu aqbalo mowqifka Emirate-ka waxaa meesha ka bixi karta baala lee yahay taageerada Turkiga iyo Qatar, ay siiyaan Dowladda Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Waraysi Cajiib ah Ka hor inta aanay dhiman Ragii weeraray Paris -Waraysigi Daawo